MAREYKANKA oo fuliyey xayiraaddii uu kusoo rogay madax SOOMAALI ah kadib dib u dhacii doorashada - Caasimada Online
Home Warar MAREYKANKA oo fuliyey xayiraaddii uu kusoo rogay madax SOOMAALI ah kadib dib...
MAREYKANKA oo fuliyey xayiraaddii uu kusoo rogay madax SOOMAALI ah kadib dib u dhacii doorashada
Washington (Caasimada Online) – Dowladda Mareykanka ayaa Jimcihii mamnuucday in mas’uuliyiin iyo shaqsiyaad kale oo Soomaali ah ay u safraan Mareykanka, iyadoo ku eedeysay inay “waxyeeleynayaan hannaanka dimuqraadiyadda” Soomaaliya.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in Mareykanka uu soo rogay xayiraadda Visa-ha kadib markii Soomaaliya ay dib ugu dhigtay doorashadii baarlamaanka 15-ka March, taas oo ay ahey in la soo gabagabeeyo Jimcihii shalay.
Go’aanka Washington ayaa yimid kadib markii lagu guuldarreystay waqtigii ay u qabatay madaxda Soomaalida inay kusoo geba-gebeeyaan doorashada Golaha Shacabka, oo aheyd 25-ka Febraayo.
“Hadda waxaan kusoo rogaynaa xannibaado Vasa aha iyadoo la raacayo siyaasaddan ka dhanka ah tiro ka mid ah mas’uuliyiinta Soomaalida iyo shakhsiyaadka kale si kor loogu qaado isla xisaabtanka falalkooda is-hortaagga ah,” ayuu Blinken ku yiri bayaan ay soo saartay Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka.
Blinken ma shaacin magacyada shakhsiyaadkan, balse waxaa la rumeysan yahay in si gaar ah ayaga loogu wargeliyey.
Kooxda Al-Shabaab, oo inta badan weeraro iyo qaraxyo ka geysta caasimadda Muqdisho iyo meelo kale oo ka tirsan Soomaaliya ayaa sidoo kale caqabad ku noqday doorashadan, waxaana bartamihii bishii hore ee Feberaayo, weerar is-miidaamin ah lala beegsaday bas ay saarnaayeen ergooyin doorasho, waxaana ku dhintay ugu yaraan lix qof magaalada Muqdisho, inkasta oo ergadia wax dhaawac ah aau soo gaarin.